Tag: wordpress yakabiwa | Martech Zone
Tag: wordpress yakabiwa
Muvhuro, July 1, 2013 Muvhuro, Kukadzi 1, 2016 Douglas Karr
Yedu saiti inoitirwa paFlywheel uye isu tiri zvakare vanobatana nekuti isu tinotenda kuti ndiyo yakanakisa WordPress yekutambira chikuva papasi. Nekuda kwekuzivikanwa kweWordPress, chave chinhu chinozivikanwa chevabambi. Izvo hazvireve kuti haigone kuve yakachengeteka chikuva, hazvo, zvinongoreva kuti zviri mune wese mushandisi anofarira kuona kuti vanochengetedza chikuva, plugins uye chengetedza yavo saiti yakachengeteka. Isu tinorega Flywheel itiitire zvakawanda zveizvi!
Shamwari yangu yakanaka nguva pfupi yadarika akawana yake WordPress blog kubiwa. Kwaive kurwisa kwakaipisisa uko kwaigona kukanganisa maitiro ake ekutsvagisa, uyezve, kukurumidza kwake munzira. Ndicho chimwe chezvikonzero nei ndichipa mazano kumakambani makuru kuti ashandise bhurogu yemubatanidzwa seCompendium - uko kune timu yekutarisisa inokutsvaga (Kuzivisa: Ini ndiri mugovani) Makambani haanzwisise kuti nei vachizobhadhara chikuva